Maka: kuqhathaniswa | Martech Zone
Uma uke waba ngumfundi webhulogi yami isikhathi eside, uyazi ukuthi igama eliqhathaniswa nokuvame ukungithumela entukuthelweni engaboni. Abantu abangaphezulu kweSoftwareAdvice bathumele i-athikili eningiliziwe, Ukumaketha Okungenayo Nokuphumayo: I-Primer yamaNewbies noma amaSwitchers. Umhlahlandlela wenza umsebenzi oncomekayo wokuhamba ngamasu, umehluko, kanye namathuluzi wamasu angenayo namasu aphumayo. Kukufanele kakhulu ukufundwa ngakho hamba uyohlola.
Lapho nje ngibona kuqhathaniswa nokusetshenziswa esihlokweni sendatshana ekumaketheni, ngithola ukumangala okuncane. Le infographic engezansi evela kuDevesh Design yenza umsebenzi omuhle wokubeka kahle isidingo samakhasimende ukusebenzisa i-imeyili enkampanini yabo. Anginakungabaza mayelana namandla we-imeyili futhi yikhono lobuchwepheshe bokumaketha i-push ukukhuthaza ababhalisile ukuthi bathathe isinyathelo. Kuyasebenza… futhi wonke umuntu kufanele abe njalo
Sisebenzisa Kanjani (vs Wena) I-Social Media?
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 6, i-2013 Douglas Karr
Anginasiqiniseko sokuthi i-Heat yaklama nini lo mbhalo ongezansi, kodwa kuhle kakhulu ukuthi ngikwabelane ngawo. Isizathu sokuthi kungani kuhle kungenxa yokuthi ukubukeka okuthembekile nokuqhathanisa ukuthi ochwepheshe bezentengiso bayisebenzisa kanjani imithombo yezokuxhumana uma kuqhathaniswa nomuntu ojwayelekile, ongamakethi. Angikholwa ukuthi abaholi abanele kule mboni badweba isithombe esithembekile sokusetshenziswa kwemithombo yezokuxhumana. Eziningi zazo zingikhumbuza i-rick sheisters esheshayo lapho. Kumele
NgoMgqibelo, Ephreli 13, 2013 NgoLwesithathu, ngoMashi 8, 2017 Douglas Karr
UJay Baer ungomunye wezikhulumi ezihamba phambili zokumaketha ezenhlalo nabalobi engibanakayo. Muva nje ubhale okuhle nge-blog post kanye ne-infographic enikezela ngokuqhathanisa okukhulu kwabashushisi kuqhathaniswa nabameli bomkhiqizo. Ukufinyelela kwabathonya kuyinto esemqoka ezinhlelweni eziningi zokuxhumana nomphakathi nezinhlelo zesimanje zobudlelwano nomphakathi. Kepha kuvame ukungaziphathi kahle ekuziphatheni okungaphezu kokuxoxa nomphakathi. Ngibhale iposi ngokuthi kungani lokhu kunjalo, okubizwa ngokuthi Kungani Unethonya Eliku-inthanethi